သူတို့ရဲ့ (၁၅)နှစ်ပြည့် မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည်နေ့လေးမှာ ချစ်ဇနီးလေးရင်ထဲထိရှသွားစေမယ့်စကားလုံးတွေနဲ့ အပီအပြင်ချုပ်လိုက်တဲ့ ဟန်ထူးလွင် – Shwe Yaung Media
သူတို့ရဲ့ (၁၅)နှစ်ပြည့် မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည်နေ့လေးမှာ ချစ်ဇနီးလေးရင်ထဲထိရှသွားစေမယ့်စကားလုံးတွေနဲ့ အပီအပြင်ချုပ်လိုက်တဲ့ ဟန်ထူးလွင်
ပရိတ်သတ်ကြီးရေ…ဒီနေ့အောက်တိုဘာလ (၂၉)ရက်နေ့လေးကတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့အချစ်တော် အဆိုတော်ဟန်ထူးလွင် (ကိုကျား) တို့ ဇနီးမောင်နှံရဲ့ မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည်ကျရောက်တဲ့ နေ့ရက်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေ့လေးက အဆိုတော် ကိုကျားတို့ ဇနီးမောင်နှံရဲ့ မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည် (၁၅) နှစ်ပြည့် ရက်မြတ်နေ့ရက်လေးပါ။ကိုကျားကတော့ ဒီနေ့မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည်နေ့လေးအတွက်ကို သူ့ရဲလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေ ချစ်ဇနီးလေး အချစ်ပိုရအောင်
“Happy 15th anniversary Zone ၊ လိမ္မာပါ ၊လူကြီးဆန်ပါ၊ Hope we’ll haveabetter future soon. ”ဆိုပြီး ရေးသားထားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ကျားပေါက်က ခုလက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံအတွင် းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အခြေအနေအရပ်ရပ်မှာ သွေးမအေး ဒူးမထောက်ဘဲ ရဲရဲဝင့်ဝင့် တော်လှန်နေတဲ့ အနုပညာရှင်တွေထဲမှာလည်း ထိပ်ဆုံးကပါဝင်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာတော့ လွတ်မြောက်နယ်မြေမှာ
ရောက်နေပြီး စစ်အာဏာရှင်ကိုဆက်လက် တော်လှန်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။
အောက်တိုဘာ ၁၇ ရက်နေ့က ကျားပေါက်ရဲ့ Doodle Art ဖန်တီးမှုနဲ့ Ukulele ဂစ်တာလေးကလည်း အချိန်တိုလေးအတွင်းမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၇,၅၀၀ နဲ့ ကမ္ဘာ့လေလံအမြင့်ဆုံးအောင်မြင်ခဲ့တာကြောင့် ကျားပေါက် ကိုယ်တိုင်ရော ပရိသတ်တွေအကုန်လုံးကလည်း ဂုဏ်ယူနေခဲ့ကြတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
Source : Han Htue Lwin’s Fb Acc
သူတို႕ရဲ႕ (၁၅)ႏွစ္ျပည့္ မဂၤလာႏွစ္ပတ္လည္ေန႕ေလးမွာ ခ်စ္ဇနီးေလးရင္ထဲထိရွသြားေစမယ့္စကားလံုးေတြနဲ႕ အပီအျပင္ခ်ဳပ္လိုက္တဲ့ ဟန္ထူးလြင္
ပရိတ္သတ္ၾကီးေရ…ဒီေန႔ေအာက္တိုဘာလ (၂၉)ရက္ေန႔ေလးကေတာ့ ပရိသတ္ေတြရဲ့အခ်စ္ေတာ္ အဆိုေတာ္ဟန္ထူးလြင္ (ကိုက်ား) တို႔ ဇနီးေမာင္ႏွံရဲ့ မဂၤလာႏွစ္ပတ္လည္က်ေရာက္တဲ့ ေန႔ရက္ေလးပဲျဖစ္ပါတယ္။
ဒီေန႔ေလးက အဆိုေတာ္ ကိုက်ားတို႔ ဇနီးေမာင္ႏွံရဲ့ မဂၤလာႏွစ္ပတ္လည္ (၁၅) ႏွစ္ျပည့္ ရက္ျမတ္ေန႔ရက္ေလးပါ။ကိုက်ားကေတာ့ ဒီေန႔မဂၤလာႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ေလးအတြက္ကို သူ႔ရဲလူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာကေန ခ်စ္ဇနီးေလး အခ်စ္ပိုရေအာင္
“Happy 15th anniversary Zone ၊ လိမၼာပါ ၊လူႀကီးဆန္ပါ၊ Hope we’ll haveabetter future soon. ”ဆိုၿပီး ေရးသားထားခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္။
က်ားေပါက္က ခုလက္ရွိ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္ းမွာျဖစ္ေပၚေနတဲ့ အေျခအေနအရပ္ရပ္မွာ ေသြးမေအး ဒူးမေထာက္ဘဲ ရဲရဲဝင့္ဝင့္ ေတာ္လွန္ေနတဲ့ အႏုပညာရွင္ေတြထဲမွာလည္း ထိပ္ဆုံးကပါဝင္ေပးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိမွာေတာ့
လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမမွာ ေရာက္ေနၿပီး စစ္အာဏာရွင္ကိုဆက္လက္ ေတာ္လွန္ေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။
ေအာက္တိုဘာ ၁၇ ရက္ေန႔က က်ားေပါက္ရဲ့ Doodle Art ဖန္တီးမႈနဲ႔ Ukulele ဂစ္တာေလးကလည္း အခ်ိန္တိုေလးအတြင္းမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၇,၅၀၀ နဲ႔ ကမၻာ့ေလလံအျမင့္ဆုံးေအာင္ျမင္ခဲ့တာေၾကာင့္ က်ားေပါက္ ကိုယ္တိုင္ေရာ ပရိသတ္ေတြအကုန္လုံးကလည္း ဂုဏ္ယူေနခဲ့ၾကတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။